Misy toro-hevitra momba ny SEO manerantany e-varotra ve?
SEO dia ampahany manan-danja amin'ny fampivoarana sy fampiroboroboana ny tranokala e-commerce. Tsy azo atao ny mivarotra zavatra an-tserasera raha tsy hita maso ny tranonkalanao. Ny fanatsarana ny fikarohana dia ny mahomby indrindra amin'ny manjo ny olon-drehetra momba ny raharaham-barotrao ary manintona ny fifamoivoizana mivezivezy izay azo antoka fa hivadika ho fivarotana. Ny avo navilanao amin'ny milina fikarohana, ny fifamoivoizana sy ny mpanjifa bebe kokoa no hizaranao any amin'ny sehatra misy anao - modern traditional bar stools. Tsy misy fomba fitsaboana manerantany ho an'ny varotra e-varotra rehetra. Ny tompon'ilay tranonkala tsirairay dia tokony handinika tsara ny tranokalany mba hananganana fanentanana fanentanana manokana. Ao amin'ity lahatsoratra ity, dia hahita torohevitra SEO manerantany ianao izay mety hanome tombony anao amin'ny fifaninanana hafa amin'ny orinasa hafa ao amin'ny tsenanao.
Tokony hanokana ny dingana voalohan'ny fampielezan-kevitra fanatsarana ny SEO ianao. Izy io dia ahitana ny fikarohana lalindalina, ny soratra amin'ny votoatiny, ny fanamafisana ny metadata sy ny fanatsarana ny pejy. Ireo mason-tsindrim-pitiliana karazana fikarohana ireo dia hanampy amin'ny fanatontosana ny kianja filalaovana toy ny lalao fifaninanana eny amin'ny tsena. Na izany aza, raha te hiditra any amin'ny TOP of SERP ianao, dia mila mampihatra toro-hevitra momba ny e-varotra e-commerce.
Manao famaritana vokatra tsara momba ny vokatra
Hifanaraka ny mpanjifa mety ho anao ary hanao azy ireo Mametraka ny tehinao, mila mamorona famaritana vokatra tsara sy tsara tarehy ianao. Mila misoroka izay rehetra omena anao amin'ny mpamanao ianao. Ny fanoritsoroana fanoritsoritsoroana am-pitiavan-tanindrazana dia hanakivy ny mpampiasa tsy hividy. Ilainao ny manonofy olona momba ny vokatrao na ny serivisinao amin'ny alalan'ny famaritana azy ireo amin'ny hazavana tsara indrindra. Mila mifantoka amin'ny tantara an-tsary sy ny tantara ianao, manamboatra feo ho an'ny orinasa.
Mamorona tarehin-tsoratra tsara tarehy
Ireo pejy ireo dia manintona sy manatsara ny tranokala. Io no iray amin'ireo fomba tsara indrindra ahafahana mijery momba ny fanatsarana ny fikarohana. Ilainao ny mampifandray ny pejin'ny sokajinao amin'ny pejy voalohany, manolotra fikarohana tery ho an'ny mpitsidika anao eo am-piandohana. Ny tranokala e-varotra anao dia mety ahitana ireto sokajy manaraka ireto - ho an'ny vehivavy, ho an'ny lehilahy, ho an'ny fanatanjahatena, ho an'ny ankizy, ho an'ny zazakely, fanomezana ary ny sisa. Tsara ny manamarina fa ny sokajin-tranonkala dia manana tantara sy fampahalalana mahasoa hafa hitarihana ny fitondran-tenan'ny mpanjifa.
Manamboara horonan-tsary misy entana
Mba hameno tsara ny pejin'ny vokatrao dia mila mamorona lahatsary momba ny varotra vidéo. Ireo horonantsary ireo dia tsy vitan'ny manampy anao hanatsara ny fikarakaràn'ny tranokala e-commerce amin'ny fanampiana fanampiny amin'ny fikarohan'i Google, fa manome anao koa ny fahafahana hamoaka azy ireny amin'ny sehatra media sosialy toy ny Facebook sy YouTube.Ireo horonantsary ireo dia fomba iray hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa sy hampiseho azy ireo antsipiriany manokana momba ireo vokatra azonao. Ankoatr'izay, mila mampiseho ny vokatra ianao amin'ny asa mba hanampiana mpanjifa hahitana ny tenany amin'ny fampiasana ny vokatra ary hijery izay zavatra tsara indrindra.